17 septambra 2011 – 17 septambra 2012 : nahitam-bokany ve ? | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
17 septambra 2011 – 17 septambra 2012 : nahitam-bokany ve ?
Herintaona katroka izao no nanaovana sonia ny tondro zotra. Ny 17 septambra 2011 tokony tamin’ny 2 ora maraina latsaka tany ho any tokoa no natao sonia izay neritreretina fa fifanarahana politika hitondra an’i Madagasikara hivoaka amin’izao krizy izao. 11 ireo vondrona sy antoko politika niara-nanao sonia ary naneho fahavononana amin’ny fanatanterahana ity sori-dalana ity. Ny ankamaroan’ireo anefa dia mbola mpomba ny mpanongam-panjakana ihany. Volana vitsy taorian’izay dia efa voaporofo sahady fa saro-piterahana ny vokatsoa antenaina hoentin’ny tondro zotra.
Ny fanendrena ireo mpikambana amin’ny andrim-pitondrana ohatra dia efa nametraka olana satria tsy mifandanja ny isan’ny mpomba sy ny mpanohitra an-dRajoelina. Zary namorona mpandray anjara hafa ny avy ao Ambohitsorohitra toy ny hoe avy amin’ny olo-be na « notables » sy ny « prérogative présidentielle ».
Fitoniana hoe ?
Hatreto aloha dia tsy mbola tafaverina an-tanindrazazana ny Filoha RAVALOMANANA mianakavy na dia voasoratra mazava tsara ao amin’ny andininy faha-20 amin’ny tondro zotra izany. Ny 21 janoary dia efa tao anaty faritr’abakabak’i Madagasikara ny fiaramanidina nitondra azy no naverina. Na dia niditra ao anatin’ny fiaraha-mitantana aza ny ankolafy tarihiny dia toa tsy manana fahefana hanamora izany fodiany izany akory ireo olom-boatendry. Lalao RAVALOMANANA sy ny vinantovaviny aza dia nampiharana herisetra sy habibiana teo imason’izy ireo saingy toa tsy afa-nanoatra akory ireo ministra sy parlemantera nahita maso izany. Manginy fotsiny ny momba ny gadra politika sy ny hainoamanjery tsy mbola nosokafana hatramin’izao. Ny hany mba ataon’Ambohitsorohitra tsianjery maimbo dia ny hampiharana ny andininy faha-45 amin’ny tondro zotra ka hanatanterahana ny didim-pitsarana manasazy ny Filoha RAVALOMANANA .
Hanao ahoana ny hoavy ?
Raha itodihana ny heritaona lasa dia toa lany andro teto indray ny Malagasy. Lany andro satria ny andininy fah-30 mametraka azy ho filohan’ny tetezamita no nahamaika an’i tgv fa tsy ny hivoahana amin’ny krizy. Poa toa izay tokoa mantsy dia afaka nipik’elika tamina fivoriana iraisam-pirenena maro ity mpitarika fanonganam-panjakana ity. Ny SADC izay miandraikitra ny fanelanelanana rahateo toa sahirahna be ihany amin’ny fampananatanterahana izay fanapahan-kevitra raisiny hany ka toa vao maika manalava ny fotoana ipetrahan-dRajoelina eo amin’ny fitondrana. Marihinan anefa fa ny kajikajy politika rehetra izay nataon’i tgv dia nikendry hatrany ny hanalavana ny fotoana ibodoany ny lapa. Mandritra izany dia ny vahoaka no mizaka ny tsy eran’ny ainy tanteraka. Sady mitaintaina amin’ny tsy fandriam-pahalemana no miasa saina mafy amin’izay sakafo hoan’ny mpianakavy.
Ny vahoaka tompon’ny fahefana no tokony ho tonga saina haingana mba hitsaharan’ny fandripahana an’i Madagasikara sy ny Malagasy. Anjara andraikitry ny tsirairay no mibanjina izay mety hoavin’ny taranaka faramandimby raha mbola hitohy izao baroa izao. Ny Malagasy rahateo efa tokony mijoro mba hanoratra ny tantarany amin’izay fa tsy hiandry hataon’ny hafa saribakoly lalandava ka hanaiky ho verezin-jo tsy hifidy izay mbola ankatoaviny hitondra azy.